ऋचाले छाडिन् ‘कमेडी च्याम्पियन २’ को होला नयाँ निर्णायक ? – Kavrepati
Home / मनोरंजन / ऋचाले छाडिन् ‘कमेडी च्याम्पियन २’ को होला नयाँ निर्णायक ?
ऋचाले छाडिन् ‘कमेडी च्याम्पियन २’ को होला नयाँ निर्णायक ?
admin August 15, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 130 Views
सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, ऋचा शर्मा र प्रदिप भट्टराई पहिलो सिजनबाट नै यो शोको निर्णायकको रुपमा छन् । ‘कमेडी च्याम्पियन २’ अन्तिम ५ मा पुगिसकेको छ । शो अन्तिम ५ मा पुग्दै निर्णायक ऋचा शर्माले भने यो शो छाड्ने भएकी हुन् ।
बिहिबारको श्रृङ्खलामा उनी आफैले डाक्टरको सल्लाह बमोजिम रेस्टमा बसेको बताएकी हुन् । सिजन ३ मा आफू आउने कुरामा बिश्वस्त रहेको पनि उनले बताइन् ।
Previous जोखिम बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा भदौ ११ गतेसम्‍म थप गरियो , सार्वनजिक तथा नीजी सवारी चलाउन रोक
Next १९ बर्षिय गर्भवती श्रिमतिलाई श्रिमानले गरे यसरी बी भत्स ह त्या (हेर्नुस् भिडियो )